မြန်မာရဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု အညွှန်းကိန်း ၆ နှစ်အတွင်း ရမှတ် ၁၄ မှတ် မြင့်တက်လာ – Sunthit Myanmar
အဂတိလိုက်စားမှုလို့ ပြောလိုက်ရင် ဥပဒေရဲ့ အထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူးဆိုတဲ့ စကားကို ကြား ယောင်မိ ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တင်အမေရိကအပါအဝင် အာရှ၊အာဖရိက နိုင်ငံအများ စုမှာ တော့ အာဏာရှိသူ စားစတမ်းမို့ ဝါးလမ်းတွေထွင်ပြီ ပြည်သူတွေကို မသေမရှင် နှိပ်စက် နေခဲ့ကြတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ မိမိအဏာရတဲ့ အချိန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ အချိန်မှာ မိမိရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ၊သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကို အများပြည်သူတွေထက် အခွင့်ထူး တွေပေးသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အထူးအခွင့်အရေးယူပြီး ဥပဒေအထက်မှာ နေရာယူကြခြင်းတွေဟာ ဒီမိုကရေစီ မထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ပြည်သူအများ သိရဲ့နဲ့ ခံရတဲ့ ဝတ်ဒုက္ခတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးရလဒ်အနေနဲ့ ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ ပြည်သူအများစုက စားရမဲ့သောက်ရမဲ့ ဘဝတွေနဲ့ ရုန်းကန်နေကြရပေမယ့် ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ အရှင်သခင်တွေကတော့ ခရီးသွားတာတောင် ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်တွေစီးတတ်ကြတယ်လို့ လီကွမ်ယု တောင် ပြောခဲ့ဖူး ပါတယ်။ ဒါတွေကို တိုက်ဖျက်ချင်လွန်းလို့ တနည်းပြောရရင် ကမ္ဘာပေါ်က ဘဝတူလူသားတွေကို သာတူညီမျှ ခံစား စေချင်လွန်းလို့ ဂျာမဏီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်ရဲ့ ညီလာခံတစ်မှာပဲ Peter Eigen အပါအဝင် လူတစ်စုက အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအဖွဲ့ The Transparency International ကို ၁၉၉၃ ခုနှစ် တည်ထောင်ခဲ့ကြတာ အခု ဆိုရင် ၂၅ နှစ်ပြည့်ခဲပါပြီ။
NEW YORK, NY, NEW YORK, UNITED STATES – 2018/11/08: Hands ofaprotester saying, no one is above the law seen during the protest.
Thousands shut down the streets of New York City, afteranationwide call to protect special counsel Robert Mueller, who is investigating possible obstruction of justice by Donald Trump and members of his presidential inner circle. (Photo by Michael Nigro/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
ဒီအဖွဲ့အစည်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်က အစိုးရတွေ၊စီးပွားလုပ်ငန်းတွေ၊အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ နေ့တဓူ၀ ဘဝတွေမှာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ကင်းရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်မှန်းချက်တွေကို ရည်မျှော်ပြီး တက်တက်ကြွကြွ လှုပ် ရှားနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၀ရဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ ပတ် သက်တဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေ အညွှန်းကိန်း Corruption Prespection Index( CPI)တွေကို နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန် ပေးခဲ့ရာ မှာ ၂၀၁၈ခုနှစ် အညွှန်းကိန်းကိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဒီအညွှန်းကိန်းမှာ သုံညကနေ ရမှတ် ၁၀၀ အထိသတ်မှတ်ထားပြီး ရမှတ်အလိုက် နိုင်ငံတွေကို အဆင့်သတ်မှတ် ပေးထားရာမှာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဂတိအကင်းရှင်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်အနောက်ဥရောပနဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံကို အမှတ်အများဆုံး ၈၈ မှတ်ပေးလိုက်ပြီး အာရှပစိဖိတ်ဒေသက နယူးဇီလန်နိုင်ငံကတော့ အမှတ် ၈၇ နဲ့ ဒုတိယအသန့်ရှင်းဆုံး သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ တတိယအဖြစ်ရမှတ် ၈၅ မှတ်စီနဲ့ အနောက်ဥရောပမှ ဖင် လန်နဲ့ အာဆီယံဒေသက စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ က ပူးတွဲသတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ စင်ကာပူက ဒီလိုအဆင့်မျိုးရောက်လာဖို့ အတွက် အမြော်အမြင်ကြီးလှတဲ့ လီကွမ်ယူဟာ အနောက်ဥရောပကို စံထားခဲ့သလို အာရှမှာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ အဂ တိ လိုက်စားမှုကို ၁၉၆၀ခုနှစ်ကစပြီး သူ့နိုင်ငံမှာ စံနမူနာပြချေမှုန်းခဲ့ကာ နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကို မြှင့်တင်ပေး ခဲ့ပါ တယ်။ဒီကနေ့ ဒီနိုင်ငံမှာ အမြော်အမြင်ဆိုတဲ့စကားကို တွင်တွင်ကြီး သုံးနေကြတဲ့ လူတွေကို လီကွမ်ယုကြီးသာ ဒီနေ့ အထိအသက်ရှင်ရှိမယ်ဆိုရင်သနားမယ်ထင်ပါတယ်။
စင်ကာပူလို ဘာသဘာဝအရင်းအမြစ်မှ မရှိတဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်၊လူမျိုးတစ်မျိုးစီးပွားဖြစ်ဖို့ အတွက် အဓိကဟာ နာ မည် ကောင်း၊ ဂုဏ်သတင်းကောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လီကွမ်ယုကြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ ကျော်ကတည်း ကနားလည် ခဲ့ တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ခုအချိန်ထိတောင် ခြေခြေမြစ်မြစ်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ မြန်မာလိုနိုင်ငံမျိုးက နောင် အနှစ် ၂၀ မပြောနဲ့ အ နှစ် ၅၀လည်း မီနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အားလျှော့စရာတော့မရှိပါဘူး။ဒီနှစ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အညွှန်ကိန်းမှာ အမှတ် ၂၉နဲ့ လာအိုနဲ့ အတူ အဆင့် ၁၃၂ ရရှိခဲ့ပေမဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကနေ အခုအချိန်ထိ ၆နှစ်တာကာလမှာ ရမှတ် ၁၄မှတ်အထိ တိုးတက် လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မနှစ်ကစာရင်းအရတော့ ရမှတ် ၃၀ ရှိခဲ့ပြီး ဒီနှစ်မှာတော့ တစ်မှတ် ကျဆင်းသွားခဲ့ ပါ တယ်။
စာရင်းထွက်လာပြီး ကြာသပတေးနေ့မှာပဲ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Prayut ကတော့ သူ့အစိုးရဟာ ဒီမို ကရေစီ ကျကျရွေးထားတာမဟုတ်တဲ့ အပြင် ဒုဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ နာရီ အချုပ်တော်ပုံမှာ အဂတိလိုက်စားရေးကော်မရှင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ် ချက် ကလည်း ရမှတ်ကို ကျဆင်းသွားစေတယ်လို့ သုံးသပ်ပြီး ရလဒ်ကို လက်ခံရမှာပဲလို့ ပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်း ဘန် ကောက်ပိုစ့်မှာ ဖတ်ရပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က ဆရာကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ အမေရိကန်၊တရုတ်နဲ့ ရုရှားတို့ကတော့ ရမှတ် ၇၁၊၃၉၊၂၈ နဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၂၂၊၈၇၊၁၃၈ အသီးသီးရှိကြပြီး တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ အတော်ပင် ကွာခြားကြတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
ကဲ၊လက်တင်အမေရိကအပါအဝင်၊အာရှနဲ့ အာဖရိက နိုင်အများစုမှာ ရှက်ဖွယ်လိလိအမြစ်တွယ်နေတဲ့ အကျင့်ဆိုးကြီး လျော့ပါးပျောက်ကွယ်တဲ့ အချိန်ဟာ အနောက်ဥရောပနဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေလိုပဲ အဲဒီနိုင်ငံကပြည်သူအများစုလည်း လူဖြစ်ကျိုးနပ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ကိုးကား။ CPI 2018/Bangkok Post
Published February 1, 2019 By sanwintun